Saaka & Suuqa Ciyaaraha iyo cRaxmaan Yamani (dhegayso) – Radio Daljir
Saaka & Suuqa Ciyaaraha iyo cRaxmaan Yamani (dhegayso)
May 23, 2017 2:04 b 0
Kaddib markii la soo gabagabeeyey horyaalada kala duwan ee qaarada Yurub waxaa hadda furan suuqa kala iibsiga ciyaartoyda.
Kooxaha qaarada Yurub ayaa hadda ku hawlan dib-u-dhiska iyo xoojinta kooxahooda ayaga oo baayacaya cayaartow kasta oo ay isleeyihiin wuxuu noqon karaa udub dhexaad. Sidii caadada ahayd lacag baa rag kala reebta, safka hore ee xaraashka cayaartowdana waxaa safan kooxaha safka hore ahna tujaariiinta ciyaaraha Yurub.
Waa mar kale iyo Saaka & Suuqa Ciyaaraha waxaana inoo daadihinaya Cabdiraxmaan Yamani oo ku sugan xarunta Daljir Bossaso. Yaa la baayacay, yaa wax baayacay, yaan rabin kooxda ay u ciyaaraan oo raba in ay qandaraaskooda buriyaan, maxaa se ka cusub naadiyada ciyaaraha adduunka? Halkan kaga bogo oo hoos ka dhegayso warbixintii koobnayd ee cRaxmaan Yamani iyo Saaka & Xubintii Ciyaaraha!
ARDAA: Xalqadii 29aad ee Taxanayaasha ARDAA